ပုံပွငျထဲက မြောကျတှေ အပွငျမှာ တကယျရှိနကွေပါတယျ … – Shwe Naung
တဈခါက သိပ်ပံပညာရှငျတဈစုဟာ မြောကျ ၅ကောငျကို လှောငျအိမျထဲထညျ့ပွီး စမျးသပျမှုတဈခုကို ပွုလုပျကွပါတယျ။ လှောငျအိမျရဲ့ အလယျမှာတော့ လှခေါးတဈခုကိုထောငျထားပွီး လှခေါးထိပျမှာ ငှကျပြောသီးတဈဖီးကို တငျထားပါတယျ။
မြောကျတဈကောငျကောငျဟာ လှခေါးထိပျကငှကျပြောသီးကို တကျယူတဲ့အခါတိုငျး မြောကျလှောငျအိမျကို အပျေါကနေ ရခေဲရနေဲ့ လောငျးခပြါတယျ။ မြောကျတဈကောငျကောငျက ငှကျပြောသီးယူဖို့ကွိုးစားတိုငျး မြောကျအားလုံး ရခေဲရနေဲ့ အလောငျးခံရတာပေါ့။
ခဏကွာမှာတော့ မြောကျတှဟော ငှကျပြောသီးတကျယူရငျ ရခေဲရလေောငျးခခြံရတာကို သတိထားမိလာကွပါတယျ။ ငှကျပြောသီးကိုယူဖို့လညျး လကျလြော့လိုကျကွတယျ။ သူတို့ထဲက တဈကောငျကောငျက လှခေါးပျေါတကျတိုငျး ကနျြတဲ့မြောကျတှကေ ဆှဲခပြွီး ထုကွထောငျးကွသတဲ့။
သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော လှောငျအိမျထဲက မြောကျတဈကောငျကိုထုတျပွီး မြောကျအသဈတဈကောငျကို အစားထိုးထညျ့လိုကျပါတယျ။ မြောကျအသဈက ရခေဲရအေကွောငျးကိုမသိတော့ ငှကျပြောသီးမွငျတာနဲ့ တကျယူဖို့ကွိုးစားတာပေါ့။
သူလှခေါးပျေါတကျတိုငျး ကနျြတဲ့မြောကျတှကေ ဆှဲခရြိုကျနှကျကွပါတော့တယျ။ ဒီတော့ နောကျရောကျလာတဲ့ မြောကျကလညျး ငှကျပြောသီးယူရငျ အထောငျးခံရတယျဆိုတာသိပွီး လကျလြော့လိုကျတယျ။နောကျတဈခါ မြောကျအဟောငျးထဲက တဈကောငျကို အခွားမြောကျအသဈတဈကောငျနဲ့ လဲလိုကျပွနျတယျ။ အလားတူပဲ ဒီမြောကျသဈလညျး ငှကျပြေားသီးတကျယူတာနဲ့ အထောငျးခံရတာပါ။
စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက ပထမဆုံးအလဲခံရတဲ့ မြောကျကလညျး ဒုတိယမြောကျသဈကို ဝငျဆျောပါသတဲ့။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူ့တုနျးကလညျးဒီလိုပဲ အထောငျးခံရလို့ သူကလညျးပွနျထောငျးတာပါ။ဒီလိုနဲ့မြောကျတှကေို တဈကောငျခငျြး အစားထိုးလိုကျတာ နောကျဆုံးမှာ မြောကျအသဈတှခေညျြးပဲ ကနျြပါတော့တယျ။ သူတို့ဟာ ရခေဲရအေကွောငျးကို မသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ “ငှကျပြောသီးကိုမယူရ၊ ယူတဲ့မြောကျကို ထုထောငျးရမယျ” ဆိုတဲ့အယူကိုတော့ ဆကျလကျကငျြ့သုံးနမွေဲပါပဲတဲ့။
ကြှနျတျောတို့ဟာ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဆုံးဖွတျခကျြတှခေနြကွေရပါတယျ။ နစေ့ဉျဘဝမှာ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေတြဲ့အခါ ကိုယျ့အတှအေ့ကွုံတှေ, သူတပါးအတှအေ့ကွုံတှေ ဓလထေုံ့းတမျးလုပျရိုးလုပျစဉျတှရေဲ့ လောငျးရိပျမိနတေတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မေးခှနျးလေး ၂ ခုလောကျ မေးကွညျ့ဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
၁။ သငျခံယူထားတဲ့ အတှေးအချေါအယူအဆတှဟော ကိုယျတိုငျစိစဈပွီး အမှနျတရားကိုမွငျလို့ ကငျြ့သုံးနတောလား…?
၂။ သငျလုပျဆောငျနတေဲ့ အပွုမူတှဟောလညျး လုပျရိုးလုပျစဉျမို့၊ သူမြားလုပျတာတှလေို့ လိုကျလုပျနတောလား၊ ကိုယျတိုငျစီစဈပွီးလုပျသငျ့လို့ လုပျနတောလားဆိုတာ ကိုယျ့ကိုကိုယျမေးကွညျ့ပါ။
ဒီမေးခှနျးတှအေတှကျ အဖွမေရှိရငျတော့ ကြုပျတို့ဟာ ပုံပွငျထဲက မြောကျတှလေိုပါပဲ။ အထူးအဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံက လူငယျတှရေဲ့စိတျဓာတျတှကေို ပုံသှငျးခံ၊ မှိုငျးတိုကျခံထားရပါတယျ။ ပုံပွငျထဲက မြောကျတှကေို လုပျထားသလိုမြိုးပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ “တို့လူလေးမြား ဆိုသလေး….” လို့ဆိုလိုကျရငျ “ဝေ.. လေ…လေး…” ဆိုတာတှမြေားပါတယျ။ ဝလေလေတှေမြေားတယျ။ ကိုယျပိုငျအတှေးအချေါမရှိဘူး။
ဘယျသူမှ ရှေ့ မထှကျခငျြဘူး, မထှကျရဲဘူး။ သူမြားထှကျရငျလညျး နောကျကနဆေဲတယျ။ အခုခတျေက အငျတာနကျခတျေဆိုတော့ online ပျေါကနေ လကျသီးလကျမောငျးတှတေမျးကွ၊ ပဈြပဈြနှဈနှဈတှဆေဲလိုကျကွ။
ဒါတှအေသာထားလို့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှအေနနေဲ့တော့ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ မှိုငျးတိုကျမခံရအောငျ, ပုံသှငျးမခံရအောငျ၊ ကိုယျ့ရဲ့အတှေးအချေါနဲ့ လုပျရပျတှကေို စိစဈကွဖို့, အမှနျတရားကိုရှာဖှကွေဖို့ စတေနာစကား ပါးလိုကျရပါတယျနျော။
တစ်ခါက သိပ္ပံပညာရှင်တစ်စုဟာ မျောက် ၅ကောင်ကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ လှောင်အိမ်ရဲ့ အလယ်မှာတော့ လှေခါးတစ်ခုကိုထောင်ထားပြီး လှေခါးထိပ်မှာ ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးကို တင်ထားပါတယ်။
မျောက်တစ်ကောင်ကောင်ဟာ လှေခါးထိပ်ကငှက်ပျောသီးကို တက်ယူတဲ့အခါတိုင်း မျောက်လှောင်အိမ်ကို အပေါ်ကနေ ရေခဲရေနဲ့ လောင်းချပါတယ်။ မျောက်တစ်ကောင်ကောင်က ငှက်ပျောသီးယူဖို့ကြိုးစားတိုင်း မျောက်အားလုံး ရေခဲရေနဲ့ အလောင်းခံရတာပေါ့။
ခဏကြာမှာတော့ မျောက်တွေဟာ ငှက်ပျောသီးတက်ယူရင် ရေခဲရေလောင်းချခံရတာကို သတိထားမိလာကြပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကိုယူဖို့လည်း လက်လျော့လိုက်ကြတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ကောင်ကောင်က လှေခါးပေါ်တက်တိုင်း ကျန်တဲ့မျောက်တွေက ဆွဲချပြီး ထုကြထောင်းကြသတဲ့။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်တစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြီး မျောက်အသစ်တစ်ကောင်ကို အစားထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ မျောက်အသစ်က ရေခဲရေအကြောင်းကိုမသိတော့ ငှက်ပျောသီးမြင်တာနဲ့ တက်ယူဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။
သူလှေခါးပေါ်တက်တိုင်း ကျန်တဲ့မျောက်တွေက ဆွဲချရိုက်နှက်ကြပါတော့တယ်။ ဒီတော့ နောက်ရောက်လာတဲ့ မျောက်ကလည်း ငှက်ပျောသီးယူရင် အထောင်းခံရတယ်ဆိုတာသိပြီး လက်လျော့လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါ မျောက်အဟောင်းထဲက တစ်ကောင်ကို အခြားမျောက်အသစ်တစ်ကောင်နဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်။ အလားတူပဲ ဒီမျောက်သစ်လည်း ငှက်ပျေားသီးတက်ယူတာနဲ့ အထောင်းခံရတာပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ပထမဆုံးအလဲခံရတဲ့ မျောက်ကလည်း ဒုတိယမျောက်သစ်ကို ဝင်ဆော်ပါသတဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲ အထောင်းခံရလို့ သူကလည်းပြန်ထောင်းတာပါ။ဒီလိုနဲ့မျောက်တွေကို တစ်ကောင်ချင်း အစားထိုးလိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာ မျောက်အသစ်တွေချည်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ ရေခဲရေအကြောင်းကို မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “ငှက်ပျောသီးကိုမယူရ၊ ယူတဲ့မျောက်ကို ထုထောင်းရမယ်” ဆိုတဲ့အယူကိုတော့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမြဲပါပဲတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေကြရပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေ, သူတပါးအတွေ့အကြုံတွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေရဲ့ လောင်းရိပ်မိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းလေး ၂ ခုလောက် မေးကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
၁။ သင်ခံယူထားတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေဟာ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ပြီး အမှန်တရားကိုမြင်လို့ ကျင့်သုံးနေတာလား…?
၂။ သင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပြုမူတွေဟာလည်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မို့၊ သူများလုပ်တာတွေ့လို့ လိုက်လုပ်နေတာလား၊ ကိုယ်တိုင်စီစစ်ပြီးလုပ်သင့်လို့ လုပ်နေတာလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးကြည့်ပါ။
ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေမရှိရင်တော့ ကျုပ်တို့ဟာ ပုံပြင်ထဲက မျောက်တွေလိုပါပဲ။ အထူးအဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို ပုံသွင်းခံ၊ မှိုင်းတိုက်ခံထားရပါတယ်။ ပုံပြင်ထဲက မျောက်တွေကို လုပ်ထားသလိုမျိုးပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ “တို့လူလေးများ ဆိုသလေး….” လို့ဆိုလိုက်ရင် “ဝေ.. လေ…လေး…” ဆိုတာတွေများပါတယ်။ ဝေလေလေတွေများတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မရှိဘူး။
ဘယ်သူမှ ရှေ့ မထွက်ချင်ဘူး, မထွက်ရဲဘူး။ သူများထွက်ရင်လည်း နောက်ကနေဆဲတယ်။ အခုခေတ်က အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ online ပေါ်ကနေ လက်သီးလက်မောင်းတွေတမ်းကြ၊ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်တွေဆဲလိုက်ကြ။
ဒါတွေအသာထားလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မှိုင်းတိုက်မခံရအောင်, ပုံသွင်းမခံရအောင်၊ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စိစစ်ကြဖို့, အမှန်တရားကိုရှာဖွေကြဖို့ စေတနာစကား ပါးလိုက်ရပါတယ်နော်။